Costa Azahar - Obodo Valencian - Spain
Njikwa ihe onwunwe
Gaa ebe ahụ
Mmadụ bịa ka Costa Azahar
La Costa Azahar Ọ bụ akụkụ nke ụsọ oké osimiri Spanish nke Oké Osimiri Mediterenian, nke dị na Province nke Castellón, nke ihe dịka kilomita 120 nke ụsọ mmiri na coves guzobere.
Aha ya sitere na ifuru oroma, ifuru oroma na ihe ọkụkụ dị mkpa na mpaghara.
Obodo ndị dị na Costa del Azahar (site na mgbago ugwu ruo na ndịda) bụ: Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Torreblanca, ụsọ oké osimiri Cabanes, Oropesa del Mar, Benicasim, Castellón de la Plana, Almazora, Burriana, Nules, Moncófar , Chilches, La Llosa na Almenara.
Isi obodo ya kachasị mma bụ obodo Benicasim na Peñíscola, ebe ọ bụ na obodo ndị a bụ nnukwu njem nleta nke obodo.
Enwekwara njem nlegharị anya na-eme ememme na Castellón n'ụsọ oké osimiri, na-enye egwu dị ka Arenal Sound Festival (Burriana), na Benicássim the Benicasim International Festival, ememme Rototom na SanSan n'etiti ndị ọzọ. Ememme Egwuregwu Electrosplash n'ụsọ osimiri Fora-Forat de Vinaroz.
Coastsọ oké osimiri ahụ gụnyere ebe ntụrụndụ nke Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicasim na Moncófar, kamakwa Sierra de Irta, ugwu nwere oke ugwu.
Anyị nwekwara ike ịkọ ala mmiri nke Prat Cabanes-Torreblanca Natural Park, na Deserto de las Palmas, yana agwaetiti Columbretes na-echekwa 56 kilomita site n'ụsọ oké osimiri. N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ichefu isi obodo: Castellón de la Plana na obodo e wusiri ike nke Mascarell.
Costa del Azahar na-ahazi okporo ụzọ A-7 na AP-7 nke jikọtara isi obodo niile wee jikọta ha na Valencia na ndịda na Tarragona na north. N-340 na-agba ọsọ n'akụkụ ụsọ oké osimiri.
Site na ime ya, A-3 na-abịa site na Madrid na A-23 na-abịa site na Teruel na Zaragoza.
Site na ikuku, a na-arụ ọrụ n'ụsọ oké osimiri nke Castellón Airport.
- Ngwa ngwa
- Marina d ’Ma ọ bụ
Mepụtara site na Ibiza Mepụta